Kuhlehle ukhetho eSheshi - Ilanga News
Home Izindaba Kuhlehle ukhetho eSheshi
Kuhlehle ukhetho eSheshi
U-Archbishop Makgoba weseka ikhwelo lokugonqa
ABABHISHOBHI baseSheshi kusukela kwesobunxele nguMbhishobhi Dkt Nkosinathi Ndwandwe 0weDayosisi yaseMthatha, uMbhishobhi Dino Gabriel osethathe umhlalaphansi, uMbhishobhi Monument Makhanya osephumule, uMbhishobhi Tsietsi Seleoane weDayosisi yaseMzimvubu noMbhishobhi Funginkosi Mbhele obambe kweyaseZululand.
ISITHOMBE NGU: TSEPO MOLEFE
UKUKHULA ngamandla kwezibalo zabantu abangenwa yiCovid-19 eNingizimu Afrika kuphoqe iNhloko yebandla laseSheshi e-Afrika eseningizimu, u-Archbishop Thabo Makgoba, ukuhoxisa ukhetho lwababhishobhi abane obekumele lube ngenyanga ezayo uNhlaba (May) ngo-ba ebalekela ukubeka engcupheni impilo yabazalwane baleli bandla.
U-Archbishop Makgoba uhlabe ikhwelo kubaphriste bonke baleli bandla lokugqugquzela abazalwane ukulandela imiyalo kahulumeni yokuzigcina besemakhaya njengoba elakuleli lisezinsukwini ezengeziwe zokugonqa ngenhloso yokunqanda ukubhebhetheka ngamandla kwaleli gciwane.
Ukhetho lwababhishobhi obeluzobe luholwa nguyena u-Archbishop Makgoba, bekuzoba ngolweDayosisi yaseNatal, iDayosisi yaseZululand, iDayosisi yaseKimberley and Kuruman eNorthern Cape neDayosisi yaseLesotho.
IDayosisi yaseNatal beyizoba nokhetho lombhishobhi mhla ka-5-6 kuNhlaba lokuvala isikhala esavuleka nyakenye kuhoxa esikhundleni isigubhukane uMbhishobhi Dino Gabriel, eyaseZululand olwayo beluzoba mhla ka-8-9 ivala esavuleka ngo-2018 kushiya ngokuzuma uMbhishobhi Monument Makhanya owayesahlale iminyaka emibili kusona.
Ukushiya kukaMbhishobhi Gabriel noMbhishobhi Makha-nya isigubhukane kwaphoqa u-Archbishop Makgoba ukuthumela eZululand uMbhishobhi Funginkosi Mbhele osathatha umhlalaphansi kwiDayosisi ya-seNatal ukuba ayovala isikhala kwathi kweyaseNatal waqoka uDean Ndabezinhle Sibisi nje-ngeVicar General yale dayosisi.
Ekhuluma neLANGA uDean Isaiah Manqele weDayosisi yaseZululand, ukuqinisekisile ukuhoxa kokhetho lokuqokwa kombhishobhi wedayosisi yabo.
“Siyasihlonipha isiphakamiso sika-Archbishop Makgoba sokuhoxisa ukhetho ngalesi sikhathi uhulumeni esazama ukwehlisa ukubhebhetheka kweCovid-19. Sinabazalwane abashonelwe ngamalungu emindeni yabo njengoba kuvalwe izwe, abanye babo esingakwazanga ukuhlanganyela nabo ukufihla abathandiweyo babo ngoba sihlonipha umyalo ka-Mengameli Cyril Ramaphosa.
“Sithwele kanzima ngalesi sikhathi sokubheduka kweCovid-19 kodwa sicela ukubambisana nabazalwane bethu ngoba siyethemba ukuthi sizodlula kulesi sikhathi esinzima,” usho kanje.
UVicar General weDayosisi yaseNatal, uDean Sibisi, ubonge abagcotshwa balesi SifundaBhishobhi ngokuqinisekisa uthando emphakathini abadlu-lisa kuyona iZwi likaSimakade ngalesi sikhathi esinzima esibhekene nezwe njengoba lisagubuzelwe yilesi sifo.
“Ziningi izinhlelo eziphazamisekile kwidayosisi yethu okuhlanganisa ukhetho nokugcotshwa kwabefundisi abasha ngoNhlangulana (June) nonyaka.
“Sesilinde u-Archbishop Makgoba ukuhlahla indlela njengoba elandela ikhwelo likamengameli lokuhlonipha yonke imithetho ebekiweyo njengoba kusabhekwa ukuthi lungehliswa kanjani lolu bhubhane lokhuvethe olungena kubantu ngamandla,” esho .
Previous articleUhulumeni wase-kzn neqhinga lokulwa ne-corona
Next articlebabalisa ngokungaholi abashayeli bamabhasi